Fitsidihana ny filatsahan-koferan'i China mitarika ny filàzana - Minghe Casting
Serivisy fakan-kevitra an-tserasera - Famolavolana sary sy vokatra vita amin'ny indostria ho an'ny faritra ampiasanao
Minghe Metal Manufacturing Co., Ltd dia orinasa mpanamboatra casting any Sina izay manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny famolavolana vokatra sy ny fanariana maty.
Miaraka amina ekipa mpamolavola sy injeniera tena mahay, ny serivisy ho an'ny consultation an-tserasera dia afaka manova ny foto-kevitrao ho lasa zava-misy, manomboka amin'ny singa mekanika ka hatramin'ny faritra ampiasaina amin'ny aérospace, automotive, hidy, elektronika, miaramila, fitsaboana, sakafo ary indostria maro kokoa. Na dia manana hevitra momba ny vokatra farany aza ianao dia azafady mba lazao anay ny takiana amin'ny antsipiriany na manolotra santionany, dia hanolotra sary famolavolana vokatra matihanina miorina amin'ny fanaingoanao izahay. Ny famolavolana ny vokatra dia azo ovaina ihany koa ho zavatra tena izy araka ny takiana amin'ny ozinina.
Amin'ny maha orinasa maty casting mamorona vokatra miavaka ho an'ny mpanamboatra mandritra ny 35 taona mahery, Minghe koa dia manana ny fahaizana manokana amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny famolavolana ny vokatra ka hatramin'ny fivoriambe ka hatrany amin'ny fitsapana sy ireo singa ilaina amin'ny fizotran'ny maty.
Manolotra fakan-kevitra amin'ny fandefasana faty amin'ny dingana maro izahay
Product design Nandritra ny taona maro niainanay tao amin'ny indostria dia fantatray avokoa ny fiheverana ny famolavolana maty izay ilaina raisina. Ireo mpanolotsaina momba ny famolavolana ny vokatra dia hanome torohevitra momba ny fomba tsara ny injeniera sy ny prototype ny vokatrao hahatratra ny zavatra takiana aminao sy hanatsarana ny fahombiazan'ny asa.
Fanariana aluminium Azontsika atao ny manara-maso ny fizotranao mandrotsaka ny fanatsarana ny famokarana anao, manondro ny fotoana ahafahana mampitombo ny tanjaky ny vokatra sy ny vokatra famokarana ary mitazona ny vidiny ambany na dia misy aza ny faritra manokana. (Indrindra amin'ny indostrian'ny fiara)
Milentika ny hafanana Mba hiarovana ny fitaovana elektronika toy ny takelaka PC, LED ary laser mahery vaika, safidy manara-penitra ny fanapahana hafanana ary afaka manampy anao hahazo tohana misimisy kokoa avy amin'ireo filomanosanao amin'ny hafanana miaraka amin'ireo milina kely kokoa.
Zinc casting die Raha mila mamorona endrika matanjaka sy be pitsiny amin'ny rindrina manify ianao dia safidy tsara dia tsara ny casting casting zinc. Vaovao amin'ny fizotran'ny casting zinc? Avelao ny consultants za-draharaha ao Minghe hitarika anao amin'ny fomba fampiharana ny fizotrany amin'ny tetikasanao.
Fivoriana sy fanandramana Minghe dia afaka manampy anao hanatsara ny fizotran'ny fivorianao mandritra ny fotoana ahodin-dàlana haingana kokoa amin'ny hazakazaka famokarana avo lenta ary mbola mitazona kalitao miavaka izay hihoatra ny fenitra fitsapana.
Serivisy amin'ny consulting hafa
Casting avy amin'ny fampiasam-bola Minghe dia afaka mihaona famaritana arakaraka ny fenitra ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO, ary GB. Manana maherin'ny 100 isan-karazany vy sy vy tsy misy vy izahay, izay nanipazanay ireo faritra amin'ny alàlan'ny fenitra famolavolana sarotra. Ny fametrahana fampanjariam-bola sarotra arakaraka ny habeny sy geometrika dia novokarina tamin'ny endrika net, mampihena ny filan'ny machining faharoa. Ny tampon'ireo fanaraha-maso sy ny fizotran'ny fizotran'ny automatique dia mamela ny fandeferana tsy miova sy azo averina hatramin'ny 0.1 mm. Ny famolavolana anay dia azo novokarina tamin'ny sakany lehibe ihany koa. Sahabo ho 10 mm ny halavany x 10 mm ny sakany x 10 mm ny halavany ary milanja kely 0.01 kg, na 1000 mm ny halavany ary milanja 100 kg.
Sand Casting Minghe Casting dia tsara amin'ny ampahany amin'ny fanariana fasika vy. Ny lanjany voafehy dia 40-2500kg. Ny elanelam-pitaovana dia misy ny vy karbonika, ny vy vita amin'ny vy, ny vy tsy misy fangarony, ny vy manganohano avo, ny vy manohitra fanoherana, ny vy avo vy, ny vy fotsy, ny vy fantsona, sns. teknolojia ary teknikanina fanariana fasika resin-fasika hamokarana ireo ampahany amin'ny fanariana fasika vy. Ny fandeferana amin'ny refy azontsika tratrarina dia ny CT10-12.
CNC fiasa Raha mila manova ny ampahany amin'ny fanariana maty ianao na mamorona endri-javatra izay tsy hain'ny lasitra fanariana maty, dia azonao atao ny manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny masinina CNC. Minghe dia iray amin'ireo orinasam-pitaovan'ny orinasa CNC ao amin'ny firenena ary afaka manampy anao hitety ny fizotrany ary hamorona vokatra avo lenta.
Famaranana vy Na ny sanding robotic na ny sary hosodoko, ny fipoahana balafomanga, ny e-coating na ny fihodinan'ny vibratory dia afaka manoro hevitra anao izahay amin'ny safidy famaranana vy maro karazana hanomezana anao ny valiny tsara indrindra sy hanomezana izay ilainao manokana.
Fampidirana alimina elektrika Mba hiarovana ireo zavatra toy ny herinaratra, fiara, jiro fifamoivoizana ary boatin'ny tilikambo finday amin'ny toetr'andro mahery, mila takelaka elektronika ianao. Minghe dia afaka mitarika anao amin'ny famaritana izay karazana hamoronana sy ny fomba famokarana azy, na boaty, kabinetra na vahaolana miendrika specialty.
Maninona no mifidy ny serivisy fanaraha-maso an-tserasera
Volavola azo itokisana mba hihaona amin'ny takiana amin'ny faritra amam-panao ho an'ny indostria maro
Manampy anao hamita ny sary CAD sy ny drafitry ny tetikasa, ny famerenana sy ny famakafakana dia misy ihany koa
Fahombiazana avo sy fotoana fohy hanodinana, vidiny mirary ao anatin'ny teti-bolanao
Mifandraisa amin'ny Minghe momba ny Die Casting na ny consultation hafa
Amin'ny maha-mpanome casting maty za-draharaha, manana ny manam-pahaizana manokana izahay hanome serivisy fikaonan-doha sarobidy ho an'ny karazana tetikasa fanariana maty. Na mila fanampiana amin'ny famolavolana vokatra ho an'ny fanariana maty na fanatsarana ny fivorian'ny Minghe ianao dia afaka manampy.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisy fanoloran-tena sy ny fomba ahafahanay manampy anao, mameno ny endrika an-tserasera ary hifandray haingana araka izay azo atao izahay.